Muxuu ka yiri Jurgen Klopp guushii ay kooxdiisa Liverpool ka gaartay Tottenham Hotspur?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Jurgen Klopp guushii ay kooxdiisa Liverpool ka gaartay Tottenham Hotspur??
(London) 29 Jan 2021. Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii weyneyd oo ay kooxdiisa ka gaartay wiilasha uu hoggaamiyo José Mourinho ee Tottenham Hotspur.
Liverpool ayaa guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Tottenham oo ay ku booqatay garoonka Tottenham Hotspur Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada 20-aad ee horyaalka Premier League.
Jurgen Klopp ayaa ciyaarta kaddib wuxuu ka hadlay dareenkiisa wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay waxqabadka, waana ogayn in ciyaarta ay noqon doonto mid xoogan oo xamaasad leh, waxaan goolal dhalinay daqiiqadihii saxda ahaa.”
“Waxa aan maanta arkay waa waxa aan nahay, wuxuu ahaa dagaal kulul, kubadda cagta ayaa ka sareyso wax walba, waxaan arkay waxyaabo badan oo aan doonayay inaan arko.”
“Waxaan ciyaarnay ciyaar wanaagsan, si fiican ayaan u sameynay daafaca iyo weerarka, cadaadiskuna wuu fiicnaa.”
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa haatan ku jirta booska afaraad ee kala sareynta horyaalka, waxayna leedahay 37 dhibcood, Reds aayaa afar dhibcood ka hooseyso hoggaamiyeyaasha Manchester City, oo u harsan hal kulan dheeri ah.
Liverpool oo guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Tottenham Hotspur oo ay booqatay… +SAWIRRO
Mourinho oo cadeeyay sababta guuldarradii niyadjabka lahayd ee Tottenham kala kulantay Liverpool